Homeसमाचारबलिउड अभिनेत्री मौनी रोयले गरिन् इंगेजमेन्ट, को हुन् त उनका मंगेतर ?
October 29, 2020 admin समाचार 10626
पछिल्लो सम’यमा बलिउड कलाकार’हरुको इंगेजमेन्ट र विबाह गर्ने होडबा’जी नै चलेको छ । यस्तै होड’बाजी चल्ने क्रममा भर्खरै प्राप्त जानकारी अनु’सार बलिउड अभि’नेत्री मौनी रोयले पनि इं’गेजमेन्ट गरेको तस्वीर आफ्नो अफि’सियल इंस्टा&ग्राममा पोष्ट गरेकी छन् ।
अभिने’त्री मौनी रोयले डा’यमंड रिंग लगाएर फोट पोष्ट गरेकी हुन् । उनको यो तस्वी’र पोष्ट भएसंगै मौ’नीले कोसंग इंगेजमेन्ट गरिन् त ? भन्ने प्रश्न उनका सबै साथी’भाईहरु र फ्या’नस्हरुमा उब्जिएको छ ।
तर मौ’नीले कसैसंग पनि इंगे’जमेन्ट भने गरेकी रहीनछिन् । यो कुरा उनले पोष्ट गरेको तस्वीर’संगैको स्टेटस्बाट थाहा हुन्छ । वास्त’वमा अभिनेत्री मौनी रोयले आफ्नो पोष्टको माध्य’मबाट एउटा ब्राण्डको बारेमा प्रमोट गरि’रहेकी थिईन् ।
यो ब्राण्ड प्राय इंगे’जमेन्ट रिंग्स् बनाउनको’लागी प्रचलित रहेको छ । मौनीले त्यही ब्राण्ड’को प्रचार गरेकी मात्र हुन् । तर उनले आफुले डायम’ण्डको रिंग्स लगाएर खिचे’को फोटो जब आफ्नो इंस्टा’ग्राममा पोष्ट गरिन् तब भने उनका फ्यान्स’हरुलाई एक प्रकारको झट्का लागेको थियो । मौनीले अ’चानक कोसंग इंगेजमेन्ट गरिन् भनेर उनलाई धेरैले कमे’न्टमा प्रश्न गरेका छन् । इताजा खबर बाट
January 5, 2021 admin समाचार 8887
बिगत केहि बर्ष देखि अस्प’तालको बेडमा जीवन संग लडाई गरिरहेकी अनिताको अबस्था झन् ना’जुक भएपछि विनोदलाई तना’ब थपिएको थियो हाल उनि राम्रो संग बोल्न सक्ने भएकी छिन केहि बुझ्ने पनि तर उनि अझै स्वस्थ हुन्
April 2, 2021 admin समाचार 6566
गायक दिनेश थापा , गायिका भावना आचार्य र गायि’का कामना ओलीको स्वर रहेको हत्ते नहाल बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । पुरुसो’त्तम सुवेदीको एरेन्ज, दीपक शर्माको शब्द संगीतमा तयार भएको गीतमा अञ्जली अधिकारी र
दलितलाई आफ्नो घरमा कोठा भाडा नदिएका कारण यि महिला ३ दिन थु’निनु पर्यो, प्रमाण नपुगे पछि भइन् रिहा
June 23, 2021 admin समाचार 5473
जातका कारण रुपा सुनारलाई कोठा भाडामा नदि’एको आरोपमा प’क्राउ परेकी सरस्वती प्रधानको रि’हाई भएकी छन् । एक दलित युवतीलाई आफ्नो घरको कोठा भाडामा नदिएको आ’रोपमा प’क्राउ परेकी सरस्वती प्रधान रिहा भएको प्र’हरीले जनाएको छ ।